झरनाकी छोरीसँग अब अनमोलको मस्ती ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV झरनाकी छोरीसँग अब अनमोलको मस्ती ! | Sagarmatha TV
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रको व्यापार ओरालो लागे पनि चलचित्र निर्माणको क्रम भने उकालो लाग्दो छ । अझ सिक्वेल चलचित्र निर्माणले पनि बाढी नै ल्याएको छ ।
चलचित्र ‘नाई नभन्नू ल’को पाँचौं सिक्वेल प्रदर्शनरत छ भने छैटौं सिक्वेल निर्माणको घोषणा भइसकेको छ । यही मेसोमा नायिका झरना थापाले आफ्नो चलचित्र ए मेरो हजुर–३ निर्माण थालेकी छिन् ।
चलचित्र ए मेरो हजुर–३ मा सुपरस्टार अनमोल केसीले अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापाकी छोरी सुहाना थापासँग ‘स्कृन’ साझेदारी गर्न लागेका छन् । फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ को मुहूर्त भएको छ । शनिबार दिउँसो साढे ३ बजे पोखराको विन्दावासिनी मन्दिरमा फिल्मको शुभ साइत गरिएको हो ।
झरनाले दोस्रो पटक ‘एक्सन–कट’ गर्ने फिल्मको मुहूर्त समारोहमा अनमोल र सुहाना दुवै उपस्थित थिए । उनीहरुले मुहूर्त सट पनि दिए । सुनिल कुमार थापाको निर्माणमा बन्न लागेको यो फिल्मको छायांकन केही हप्तामा शुरु हुने निर्देशक थापाले जानकारी दिइन् । सुहाना डेब्यु फिल्मलाई लिएर उत्साहित देखिएकी छन् । अनमोलले पहिलो पटक स्टार किड्ससँग काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ’ए मेरो हजुर ३’ को फ्लोरमा निस्कनु अगावै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको छ । चैत २९ गते फिल्म रिलिज हुँदैछ ।
आफ्नो छैटौं प्रोजेक्ट ‘क्याप्टेन’ को छायांकन सकिएका कारण अब अनमोल खाली छन् । यही बीचमा फिल्मको सुटिङ सुरु गर्ने निर्माण टिमको तयारी छ । अबको केही दिनमा अनमोल र सुहानाले वर्कशप ज्वाइन गर्नेछन् । रोमान्टिक लभस्टोरी जनरामा निर्माण हुने उक्त फिल्म सुहाना इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्न लागेको हो ।
‘ए मेरो हजुर’ अब आफैंमा एक ब्रान्ड भइसकेको छ । गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मको दोस्रो सिरिजमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता सलिनमान बनियाँ लिड रोलमा थिए । उक्त चलचित्रले चलचित्र बजारमा राम्रै साथ पाएको थियो । तेस्रो प्रोजेक्टलाई पनि दर्शकले राम्रे साथ दिने निर्माण पक्षको अपेक्षा छ ।